Ogaden News Agency (ONA) – Waqooyi Kuuriyada oo Bam Haydarojiin Ah Tijaabisay.
Waqooyi Kuuriyada oo Bam Haydarojiin Ah Tijaabisay.
Posted by Dayr	/ September 4, 2017
Waqooyi Kuuriyada ayaa xaqiijisey in ay tijaabiyeen Bam Haydarojiin ah, subaxnimadii hore ee Axadii. Fariinta Kuuriyada Waqooyi ku xaqiijisey tijaabadan cusub ee hubkan Nukliyeerka ah ayaa laga sii daayey Telefishanka qaranka ee dalkaas.
Sida laga soo xiganayo Kuuriayda Waqooyi Bomkan ayaa lagu xidhay gantaal waxaana lagu guuleystey tijaabadaas. Subaxnimadii hore ee shalay ayaa laga dareemay dhul-gariir ka dhacay Kuuriayda Waqooyi kuwaas oo warbaahinta qaarkood sheegeen in dhul gariir ka dhacay Kuuriyada Waqooyi.
Sida laga soo xiganayo dalka kale ee Kuuriyada Koonfureed, dhul gariirka ayaa laga dareemay halkii horey loogu tjaabiyey hubka nukliyeerka ah. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtey in xukuumadda iyo saraakiisha sare ee dalkaasi ay shir deg-deg ah isugu imaanayaan oo uga hadlayaan sida ay ka yeelayaan tijaabadan cusub oo ah kii 6aad sanadkan gudihiisa.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dhegaha ka fureysatey hanjabadaha uga imaanaya Maraykanka, waxaana tani ay caddeyn u tahay sida Kuuriayda Waqooyi aysan ugu jixinjixieynin digniinta lasiinayo.